IZenzo 18 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
18 Emva kwezi zinto wemka eAthene waza waya eKorinte. 2 Yaye wafumana umYuda othile ogama linguAkwila,+ inzalelwane yasePonto owayesandul’ ukufika evela eItali,+ noPrisila umfazi wakhe, ngenxa yokuba uKlawudiyo+ wayeyalele ukuba onke amaYuda emke eRoma. Ngoko waya kubo 3 yaye ngenxa yokuba babesenza umsebenzi ofanayo wahlala kwikhaya labo, wasebenza nabo,+ kuba umsebenzi wabo yayikukwenza iintente. 4 Noko ke, wayenikela intetho kwindlu yesikhungu+ iisabatha zonke, eseyisela amaYuda namaGrike. 5 Ke kaloku bakuhla uSilas+ noTimoti+ bevela eMakedoni, uPawulos waxineka lilizwi, enikela ubungqina kumaYuda bokungqina ukuba uYesu unguKRISTU.+ 6 Kodwa emva kokuqhubeka echasa yaye etshabhisa,+ wavuthulula izambatho+ zakhe waza wathi kuwo: “Igazi lenu+ malibe phezu kweentloko zenu. Mna ndimsulwa.+ Ukususela ngoku ndiza kuya kubantu beentlanga.”+ 7 Ngako oko wesuka apho waya kwindlu yomntu ogama linguTitiyo Yusto, umnquli kaThixo, ondlu yakhe yayayamane nendlu yesikhungu. 8 Kodwa uKrispo+ igosa elongamelayo kwindlu yesikhungu waba likholwa eNkosini, ngokunjalo nabo bonke abendlu yakhe. Kwaye abaninzi eKorinte abevayo bakholwa baza babhaptizwa. 9 Ngaphezu koko, ngobusuku iNkosi yathi kuPawulos+ ngombono: “Musa ukuba noloyiko, kodwa qhubeka uthetha uze ungathi cwaka, 10 ngenxa yokuba ndinawe+ yaye akukho mntu uya kukuhlasela aze akwenze okubi; kuba ndinabantu abaninzi kwesi sixeko.” 11 Ngoko wahlala apho unyaka neenyanga ezintandathu, efundisa phakathi kwabo ilizwi likaThixo. 12 Ke kaloku ngoxa uGaliyo wayelibamba+ laseAkhaya, amaYuda amvukela ngamxhelo mnye uPawulos aza amsa kwisihlalo sokugweba,+ 13 esithi: “Lo mntu weyisela+ abantu ukuba bamnqule uThixo ngendlela enxamnye nomthetho.” 14 Wathi ke xa uPawulos aza kuvula umlomo, uGaliyo wathi kumaYuda: “Ukuba, eneneni, ibibububi obuthile okanye isenzo esingendawo sobutshijolo, maYuda, bendiya kuba nesizathu sokuninyamezela ngomonde. 15 Kodwa ukuba ziimbambano ezingentetho namagama+ nomthetho+ phakathi kwenu, nimele nizibonele ngokwenu. Andinqweneli ukuba ngumgwebi wezi zinto.” 16 Ngako oko wawagxotha esihlalweni sokugweba. 17 Ngoko onke ambamba uSosithene+ igosa elongamelayo kwindlu yesikhungu aza ambetha phambi kwesihlalo sokugweba. Kodwa uGaliyo wayengazixhalabisi konke konke ngezi zinto. 18 Noko ke, emva kokuhlala iintsuku eziliqela, uPawulos wacela indlela kubazalwana waza wanduluka ngesikhephe esiya eSiriya, enoPrisila noAkwila, ezichebile zaba mfutshane+ iinwele zentloko yakhe eKenkreya,+ kuba wayenze isifungo. 19 Ngoko bafika e-Efese, waza wabashiya apho; kodwa yena wangena kwindlu yesikhungu+ waza waqiqa namaYuda. 20 Nangona ayemcela ukuba ahlale ixesha elidana, wayengavumi 21 kodwa wacela indlela+ waza wathi kuwo: “Ndiza kubuyela kuni kwakhona, ukuba uYehova uyathanda.”+ Wahamba ngolwandle esuka e-Efese, 22 wehla waya eKesareya. Wenyuka waya kubulisa ibandla, waza wehla waya kwa-Antiyokwe. 23 Emva kwexesha elithile elapho wemka waya kwiindawo ngeendawo etyhutyha ilizwe laseGalati+ naseFrigiya,+ ebomeleza+ bonke abafundi. 24 Ke kaloku umYuda othile ogama linguApolo,+ inzalelwane yaseAleksandriya, indoda eliciko, wafika e-Efese; yaye wayezazi kakuhle iZibhalo.+ 25 Yena wayeyalelwe ngomlomo indlela kaYehova yaye, njengoko wayevutha ngumoya,+ wayehamba ethetha kwaye efundisa ngokuchanileyo izinto ezingoYesu, kodwa eqhelene nobhaptizo lukaYohane+ kuphela. 26 Yaye wathetha ngokukhaliphileyo kwindlu yesikhungu. Xa uPrisila noAkwila+ bamvayo, bamthabathela kubo baza bacokisa ukumcacisela ngokuchane ngakumbi indlela kaThixo. 27 Ngokubhekele phaya, ngenxa yokuba wayenqwenela ukuya ngaphesheya eAkhaya, abazalwana babhalela abafundi, bebabongoza ukuba bamamkele ngobubele. Ngoko akufika apho, wabanceda+ kakhulu abo babekholiwe ngenxa yobubele obungasifanelanga [bukaThixo];+ 28 kuba ngokucokiseke kakhulu wawangqina esidlangalaleni amaYuda ukuba aphosisile, ngoxa wayebonakalisa ngeZibhalo+ ukuba uYesu unguKRISTU.+